Wiil Soomaaliyeed oo lagu dhaawacay K/Afrika | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wiil Soomaaliyeed oo lagu dhaawacay K/Afrika
Wiil Soomaaliyeed oo lagu dhaawacay K/Afrika
Wiil dhallinyaro oo Soomaali ah ayaa dhawaan weerar ay ku qaadeen qowlaysato u dhalatay Wadanka Koonfur Afrika ka soo gaaray dhawaan, kadib markii ay xabad ku dhufteen isagoo markaasi xirayay goobtiisa ganacsiga, kaasi oo hadda lagu daweynayo Isbitaal ku yaalla Magaalada Cape Town ee Dalka Koonfur Afrika.
Wiilka la dhaawacay oo magaciisa la yiraa Amiin Axmed Calasow oo loo yaqaan Amiin Xagaleey ayaa falkaasi uu ku dhacay isagoo markaasi doonayay inuu ka rawaxo goobtiisa Ganacsi ayay Koox hubeysan Xabad kaga dhufteen meel ka hooseysa Caloosha, islmarkaana waa ay ka baxsadeen goobtii ay falkaasi ka geysteen.
Amiin Xagaleey oo ay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA kula xariirtay khadka Telefoonka isagoo ku sugan Isbitaalka ayaa sheegay in Dukaankiisu oo ku yaal Magaalada Khalisha Xaafadda Sey bii ay goor habeen ah soo weerareen Niman hubeysan, islmarkaana ay xabad ku dhufteen.
“habeen 3- saac ayay aheyd waxaan rabay in aan dukaanka soo xiro, balse waxaan la kulmay Niman dibadda jooga, dood ka dib waxay igu dhufteen xabad, markii ay I arkeen inaan dhulka ku dhacay ayay iga carareen, kadib waxaa ii gurmaday oo dhaawaceyga keenay Isbitaalka Dhalliyaro Soomaaliyeed”, ayuu yiri Amiin Xagleey.
Mar ay SONNA waydiisay xaaladdiisa Caafimaad hadda waxa uu sheegay in Ilaah mahaddii qalliin kadib ay hadda xaaladdiisa caafimaad aad u fiican tahay.
Ma aha markii ugu horreeysay oo Dad Koonfur Afrikaan ay dil, dhaawac iyo boob hantiyadeedba u geystaan Dadka Ajnabiga ah, gaar ahaan Soomaalida.
Previous articleDowladda Soomaaliya” Dhawaan waxaa la soo deynayaa maxaabiista nooga xiran xabsiyada India iyo Seyshells
Next articleQarax ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar